Wararka Maanta: Talaado, Mar 24, 2020-Tababare C/qaadir Maxamed Faarax (Biriq) oo dalka Ingiriiska ugu geeriyooday cudurka Coronavirus
Marxuumka ayaa maalmihii ugu dambeeyay yiilay isbitaal kuyaala London halkaas oo xaaladdiisa caafimaad lagula tacaalayay.
Waxaa uu kamid noqonayaa Soomaali badan oo dalka dibadiisa ku sugnaa oo cudurkaan u geeriyooday saddexdii maalmood ee ugu dambeysay.
Dalka Sweden ayaa kamid ah meelaha laga diiwaan galiyay dhimashada ku dhawaad 10 qof oo Soomaali ah oo u badan dad da’a.
Cabdiqaadir Maxamed Faarax (Biriq), ayaa sanadkii 1961 ku dhashay magaalada Baladweyne. Sanadkii 1976 ayay ahayd markii ugu horeysay ee uu bilaabay kubada cagta, isaga oo u soo saftay kooxdii kubadda cagta ee gobolka Hiiraan. Biriq ayaa markii dambe ku biiray kooxdii kubadda cagta ee BATROOLKA. Allaha u naxariistee Cabdulqaadir Biriq wuxuu ahaa shaqsi magac weyn ku lahaa bahda Sportiga Soomaaliya.